people Nepal » क्रिकेटर सन्दीपको क्यानाडामा उत्कृष्ट प्रदर्शन , ४ खेलमा लिए ५ विकेट ! क्रिकेटर सन्दीपको क्यानाडामा उत्कृष्ट प्रदर्शन , ४ खेलमा लिए ५ विकेट ! – people Nepal
क्रिकेटर सन्दीपको क्यानाडामा उत्कृष्ट प्रदर्शन , ४ खेलमा लिए ५ विकेट !
नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने ग्लोबल टि–ट्वान्टी क्यानडा लिग क्रिकेटमा पनि सफल भएका छन् । मोन्ट्रियल टाइगर्समा आबद्ध सन्दीपले क्यानेडियन लिगमा ४ खेलबाट ५ विकेट लिएका छन् ।